UMotaung uthi angeke asilibale esase-Ellis Park - Ilanga News
Home Ezemidlalo UMotaung uthi angeke asilibale esase-Ellis Park
Isibhicongo sadlula nemiphefumulo ewu-43 ngeSoweto Derby
UKAIZER Motaung uthi akasoze alulibala usuku lomhla ka-11 kuMbasa 2001, lapho kwashona khona abalandeli abangu-43 kwiSoweto Derby
USIHLALO weKaizer Chiefs uthi usathuthumela namanje umzimba uma ecabanga ngenhlekelele eyenzeke ngomhla ka -11 kuMbasa (April) ngo-2001 e-Ellis Park Sta-dium, eGoli lapho kudlule khona emhlabeni abalandeli bebhola abangu-43 abebezobuka umdlalo wezinkunzi zaseSoweto iKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates.
Izolo ngeSonto bekuphela imi-nyaka engu-20 selokhu kwenzeka le nhlekelele eshiye abantu emhla-beni wonke bebambe ongezansi.
UMotaung uthi akasoze ayikho-hlwa into ayibona ngamehlo akhe, yingakho kufanele ngaso sonke isikhathi ukuphepha kwabalandeli emidlalweni kuhambe phambili.
“Sekuphele iminyaka engu-20 selokhu kwenzeke inhlekelele yase-Ellis Park.
“Abantu bebeze e-Ellis Park ukuzobuka umdlalo omuhle, ama-phaphu ephezulu ngalo mdlalo.
“Bekungubusuku obuhle, konke kuhamba kahle. Waqala umdlalo. Ngesikhathi uqala nje, lapho ebe-ngihleli khona bengibona ukuthi kunesixakaxaka esenzekayo kwe-linye lamakhona enkundla okuho-lele ekutheni umdlalo umiswe.
“Onogada nabanye babizwe uku-ba bayobheka isimo njengoba aba-ntu babepitshizana befuna uku-ngena nge-ndluzula nga-phakathi enkundleni.
“Kubuhlungu ngoba lolo suku oluhle lwavele lwaphenduka olumuncu kweminye imindeni ngoba baningi abantu abafa nabalimala.
“Abanye bethu ababelaphaya siyohlale silukhumbula lolu suku ngoba alusoze lwasuka emiqo-dweni yethu ngenxa yesakubona kwenzeka.
“Kwaba wusuku olumnyama ebholeni laseNingizimu Afrika,” kusho uMotaung.
Uthi bafunde lukhulu ngalesi sigameko yize kudlule abantu emhlabeni.
“Kuningi okuphoqe ukuthi sikuguqule ukuze ngokuzayo singabhekani nesimo esinjena.
“Izifundo esizithole kulo mdlalo zenze sakubeka eqhulwini ukubaluleka kwezimpilo zabantu.
“Uma sinemidlalo izimpilo zabantu yizona okufanele zihambe pha-mbili, yingakho kuze kube yimanje asikaze sibe nesimo esithi asifane nalesi.
“Emindenini eyathinteka nalabo abalimala sifisa baqine, siyafisa noMdali ukuthi abaqinise.
“Nalabo abalahlekelwa ngababathandayo bahlale bazi ukuthi sinabo,” kusho uMotaung.
Uthi kufanele luhlale lukhunju-lwa lolu suku.
“Kubalulekile ukuthi sihlale silukhumbula lolu suku ngoba lushiye izibazi kithina. Wonke umdlalo esiwudlalayo kufanele sihlale sibakhumbula ikakhulukazi uma kwenzeka siya kodlala e-Ellis Park yize kungasenzeki kamuva.
“Uma kwenzeka siya kule nku-ndla kufanele sikuqinisekise ukuthi abantu bayela ukuyozithokozisa. Siyakhuleka kuMdali ukuba imindeni eyalahlekelwa ngabatha-ndekile bayo nalabo abalimala iduduzeke. Ngikhuluma ngimele iKaizer Chiefs nabathandi bebhola, ngithi lolu suku luyohlale lu-mqoka ezimpilweni zethu.
“Siyabonga ngokwesekwa ebesilokhu sikuthola kusukela kwenzeke le nhlekelele. Ngethemba ukuthi lento ngeke iphinde yenzeke,” kuphetha uMotaung.
Previous articleKukhonjwa abe-SRC ngesiphithiphithi eDUT
Next article“abokufika nezidakamizwa zika-3.6m”